Tubbo - sida loo doorto iyo sida loo daryeelo tubada?
Tuubis - xeerarka loogu talagalay tuubada nabdoonaanta
Iyada oo ay ka mid tahay casriga sida tuubada, noloshii jecel ee skis iyo boorsooyin yaryar ayaa noqday mid aad u kacsan, iyo carruurtu waxay heleen qalab aad u qurux badan, taas oo ah mid aad uugu fudud oo ka badan. On "cheesecake" raaxo leh, carruurta iyo dadka waawayn labadaba, xulashada moodooyinka waa mid aad u weyn, iyo shirkaduhu waxay sii wadaan inay soo saaraan kuwo cusub. Laakiin ma waxay yihiin ammaan, sida iibiyayaashu hubiyaan?
Waa maxay tubada?
Ereyga aan caadiga ahayn wuxuu la mid yahay erayga Ingiriisiga ah "trompet" oo macnaheedu yahay inuu ku foori karo boodhadhka barafka ee barafka ama biyaha. Weli waxaa loo yaqaan "cheesecake", "bagels" iyo bukaanka. Tuubistu waa madadaalo aad u fiican, labadaba jiilaalka iyo xagaaga, xataa noocyo badan oo dad ah ayaa la bixiyaa. Xidhmadda khaaska ah waxay yaraynaysaa jajabinta inta lagu jiro xajmiga waxayna dejisaa xawaare aad u weyn. Su'aalaha la aqoonsan yahay ee tuubada tubada:
Qolalka waxay saameyn ku yeelataa saamaynta ay ku leedahay;
Waxay qabtaa badbaadin badbaado;
Si aad u jiidatid tuubbada tuubada ayaa ka sahlan biraha birta ah;
Qaybaha ayaa ku xiran wadajir, maaha qalin.
Khatarta ah in la fuulo tuubo
Iyada oo dhammaan faa'iidooyinka, tube ayaa sidoo kale leh dhinacyo taban, kuwaas oo sidoo kale qiimeynaya. Inkasta oo shirkaduhu hubiyaan nabadgelyada moodooyinka cusub, dhibaatooyinka ay la kulmaan, waxaa jira dhowr waxyaalood:
Xawaare aad u badan.
Maareyn karin qalabka.
Xawaaraha sarreeya, xooga saameeya saameynta isku dhaca. Haddii buuruhu aad u sarreeyaan, oo feeruhu aad u culus yahay, khatarta dhaawacu kor ayuu u kici karaa dhowr jeer. Dhakhaatiirtu waxay kugula talinayaan isticmaalka tuubbooyinka carruurta ee buuraha hoose, iyada oo aan caqabad ku ah, oo si sahlan looga saaro wadada. Oo waxay kugula talinayaan inaad barato cunugga sida saxda ah u dhacaya, taasina waxa ugu fiican in lagu baro qaybaha isboortiga ee judo ama sambo.
Si loo yareeyo dhacdada dhaawaca inta lagu jiro tubada, waa inaad raacdaa xeerarka soo socda:
Isticmaal tuubooyinka kaliya ee wadooyinka.
Ha u fuulin dadka badan ee kufadhig loogu talagalay hal qof.
Dooro mawqif aad u adag, soo jiidasho leh - oo leh jajab ilaa 20 digrii.
Ha ku xirin kabixi baabuur ama mootada si aad u raacdid.
Xeerarka loogu talagalay fuulista
Haddii aad raacdo shuruucda isticmaalka, oogista baaldiidu waxay noqon doontaa mid ammaan ah. Ka ilaalinta waxyeellada dhulka, badeecadu ma ilaalin karto mulkiilaha shilalka, sidaa daraadeed waa lagama maarmaan in la sharaxo ilmaha wixii aan la qaban karin. Mamnuucsan:
Tuubinta isla shirkad la mid ah kuwa leh milkiilayaasha birta.
Ka tag buurta leh "lokomotif", oo dhowr jeer oo tobogooga ah maraya.
La sii daayo inta ay ka soo wareegayaan gacanta.
Kursiga istaag ama jiifso.
Ku fadhiiso shirkad lakulma, oo loogu talagalay mid.
Lugaha cagaha marka uu soo degayo.
Iska xakamee meelo baraf ah ama boodboodo.
Sidee loo doortaa tuubada barafka?
Tuubbo loogu talagalay skiingka waa la iibsan karaa iyo laba kursi, oo loo qaabeeyey seddex seddexaad, laakiin waxaad u baahan tahay inaad miisaan u yeelato miisaanka guud. Waalidiin badani waxay aaminsan yihiin in horumariyayaashu ay xannaaneeyeen dhammaan tallaabooyinka amniga, laakiin tani maaha sidaas, waa inaad si taxaddar leh u iibsataa iibsashada marka loo eego baabuurka. Sidee loo doortaa tuubada saxda ah?
Ka feker koritaanka qof u socdaalka. Haddii kobaca uu yahay ilaa 100 sentimitir, dhererka qoob-ka-ciyaarka waa inuu noqdaa qiyaastii 85 sentimitir. Dhibaatada labadaba, dhererku wuxuu kordho 120 sentimitir, waana lagama maarmaan in la soo iibsado qaab leh afar gacan.
Goobtu waa ballaaran.
Waxaa ugu wanaagsan inaad soo iibsato tuubo leh jajabyo kuwaas oo daboolaya godadka loogu talagalay kamarad. Jidhka ayaa la jarjarayaa, lakabana waxaa lagu dabooli doonaa baraf.
Qalabka daboolka waa inuu noqdaa mid xoogan, dharka ugu fiican ee PVC ayaa loo tixgeliyaa.
Fiilada qabsashada tuubada waa inay ahaataa ilaa 150 sentimitir, xaddiga u oggolaanaya inuu badalo xarigga ayaa ah mid u fiican.
Ka fikir cufnaanta unugyada. Haddii aad qorsheyneysid inaad dhowr jeer toddobaadkii isku deyso, maaddo yar-yar ayaa ku haboon, haddii - maalin kasta, waa qiimo iibsasho weyn leh. Taageerayaasha buuraha barafka ah waxay si fiican u iibsadaan tuubo leh hooseeyaal caag ah.
Sidee loo xiraa tubada?
Badbaadada skierka wuxuu si toos ah ugu xiran yahay haddii tuubada si habboon loo faafiyo. Maxaad ubaahantahay inaad ka ogaato sida loo feero tuubada? Waxbarashadu waa mid sahlan:
Kala bixi daboolka adiga oo dooranaya dusha sare.
Saar qolka si aad uhesho suunka meel hoose iyo hoos.
Bamgareynta ilaa kamaradu si buuxda u buuxiso kiiska.
Kala saar bamka, hubi adkeynta guluubka. U hubso inaad xirto ama aad la socotid.
Sidee loo damin karaa tuubada guriga?
Yaree "cheesecake", sidoo kale, waxaad u baahan tahay si karti leh. Sida loo demiyo tuubada, waxbarashadu waxay si kooban u sharraxaysaa: samee ficilada la mid ah markii markaad ku foorarsato, oo kaliya marka loo eego amarka. Isticmaalayaasha khibradda leh waxay bixiyaan taladaas
ka dib marka aad barafka u baahan tahay inaad tuujiso hawo yar, sababtoo ah, helitaanka dhaxan aqal diirran, wuxuu jebin karaa kamarad;
Waa sahlan tahay in la sii daayo hawada adigoo gelinaya cirbadda tuubada mashiinka si tartiib ah.
Sida loo keydiyo tuubada xagaaga?
Toboggan - waa qalab aad u qaali ah, laakiin ma jaban, gaar ahaan haddii aad doorato alaab tayo sare leh. Faa'idada ugu weyn waa in xagaaga tuubadu ka qaadato meel aan ka yarayn cirifka, laakiin waa lagama maarmaan in lakulo "cheesecake" si sax ah. Kadibna ma shaqeyn doono hal sano. Halka iyo sida loo xafidayo tuubada xagaaga? Qaar ka mid ah talooyinka qiimaha leh ee baakadaynta:
Ka saar qashin kasta oo ka soo baxa, si aanay u dhicin dharka.
Si fiican u qallaji dharka.
Ka soo qaad kamaradda, waxaa wanaagsan inaad si gooni ah u ilaaliso si aanay u dhaawici daboolka tuubada.
Xaji jaridda xabagta leh, bacaha waa in laga soo galiyaa gudaha.
Si buuxda u sii daa hawada, ku rid "cheesecake" boorso. Tani waxay badbaadin doontaa meelaha bannaan ee dabaqa ah waxayna ka ilaalineysaa alaabta lagu ciyaaro waxyeello suurtagal ah.
Sidee loo habeeyaa?
Dhexdhexaad udubdhexaad ah
Ku soo dhawow carruurta
Sidee loo raacaa barafka?
Sidee si habboon u saliideysaa sariirta caaga ah?
Dillaaca jilibka lugaha ee wadajir ah - sabab, calaamado iyo daaweyn aan lahayn qalliin
Sidee loo doortaa kabaha barafka?
Xoqidda muruqyada lugaha
Kubadda Cagta - xeerarka ciyaarta iyo qiimeynta aduunka
Garbaha la tuuray
Farsamaynta barafka barafka
Koritaanka Eliyaas ee Wood
Rocco Richie aad ayey ugu faraxsan tahay inaysan ku noolayn Madonna
Furitaanka Angelina Jolie iyo Brad Pitt: jawaab celinta Clooney, Adele, Bisset iyo xiddigo kale
Cupcake ee Multivariate - cuntada sida
Actress Kate Hudson ayaa ku faraxsan taageerayaasha iyagoo leh décolletage qoto dheer
Colpis aan lahayn
Sidee loo siinayaa mugga timo dhuuban?
Sidee loo dhigaa saqafka qubeyska?
Indhaha oo barara subaxdii
Waa maxay faa'iido-darrada bran?
Goorma ayaad galmo sameyn kartaa ka dib markaad dareento?
Maraq lenil - farmaajo
Veniamin Fedchenkov caasimadda ayaa ka hadlay dhamaadka dunida
Sidee loo mamnuucayaa bisad inuu qaniino?
Ku labisan dhar
"Maxay tahay sababta aan miisaanka u lumin?"
Sidee loo xiraa dhar
Ilmuhu wuxuu sariirta ku dhacay 6 bilood